3 European Ọnọdụ Best gara Train | Save A Train
Home > Travel Europe > 3 European Ọnọdụ Best gara Train
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 28/08/2020)
E nwere ọtụtụ mara mma obodo na Europe, na ihe bụ ihe ọzọ, ọ bụ otú mfe ileta ha niile. Ejegharị ejegharị site okporo ígwè bụ a oké ụzọ ahụ ndị a ịwụ-ndepụta ebe. ebe a na- 3 European obodo kacha mma gara ụgbọ okporo.
Anyị na-amalite anyị European obodo kacha mma gara ụgbọ okporo ígwè na-nketa: eji, Belgium
E nwere ihe na Belgium karịa dị nnọọ chocolate. Bruges bụ ma ama n'ihi ịbụ a kanaal obodo, dị ka Venice na Amsterdam. N'ezie, obodo ahụ dum bụ a UNESCO World Heritage saịtị. Eleta Bruges ụgbọ okporo ígwè bụ oké echiche ebe ọ bụ na Bruges isi n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị nnọọ a 10 nkeji na-eje ije site na niile bụ isi shopping n'okporo ámá na 20 nkeji ahịa square. Ọ na-enyekwa ụgbọ oloko ndị ọzọ nile na isi obodo na Belgium, nakwa obere, France, na Thalys na-azụ Paris–Brussels-Ostend.
Ya mere akwụkwọ gị ụgbọ okporo ígwè tiketi na-enwe mara mma saịtị nke eji. Jide n'aka na-enwe Mayo fries na a obodo biya.
Maka anwụ: Seville, Spain
Olee ihe i chere banyere anwụ na European obodo kacha mma gara ụgbọ okporo? Gịnị banyere ọmarịcha Andalucian Okirikiri na Arab ije? Dị mma? Mgbe ahụ Seville bụ maka gị.
Ọtụtụ njem atụle a ụgbọ okporo ígwè eme njem Spain na-eche nke Barcelona ma ọ bụ Madrid, ma ata ọla ụgha n'ihu ndịda, na Spain nke anọ kasị n'ọnụ ọgụgụ obodo.
Seville si Santa Justa ụgbọ okporo ígwè bụ akụkụ nke a oke ọsọ, ise-akara COMMUTER ọrụ na-ejikọ 17 isi Spanish obodo, ka e nweghị ụzọ ka mma isi na-eme njem karịa ụgbọ okporo ígwè.
Mgbe ị gara, jide n'aka na ị gaa na ume-na-ewere katidral na-aga na a tapas tour – ị nwere ike book with an organized group.
European obodo kacha mma gara ụgbọ okporo ígwè N'ihi na nlegharị anya: Munich, Germany
Munich bụ a mara mma mix nke ọhụrụ akara dị ka BMW n'isi ụlọ ọrụ na Allianz Arena na akụkọ ihe mere saịtị dị ka ndị Nymphenburg Obí and the Munich Hofgarten and that is why we have put her on our European cities best visited by train.
mgbe ịga Germany ụgbọ okporo ígwè, i nwere ike hop na na Venice, njem site Verona, Trento, na Innsbruck, na – dị nnọọ awa asaa mgbe e mesịrị – -na Munich. The echiche tinyere ụgbọ okporo ígwè na-breathtaking. Obodo ndi Italiantali mara mma mee uzo maka ndi Alps na mgbe ahụ Dolomites tupu o rutere na Munich.
Mgbe ị gara, jide n'aka na-agbalị ụfọdụ a ‘Munchner Weiswurst', soseji-eje ozi na freshly butere pretzels na-atọ ụtọ mustard. Asa ya ala na otu n'ime famed Bavarian beers.
Ị na n'ike mmụọ nsọ gaa otu n'ime ndị a ọmarịcha European obodo? European obodo kacha mma gara ụgbọ okporo nwere ike gbaa akwụkwọ na nke kacha mma gbaa ụgbọ okporo ígwè ahịa na Saveatrain.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F3-european-cities-best-visited-by-train%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Train Travel Travel njegharị travelfrance Njem